ဝေဒနာခံစားခြင်းနှင့်အုပ်စိုးခြင်း | Suffering and Reigning | Real Conversion
၂၀၁၃၊ စက်တင်ဘာ ၂၉ရက်၊ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့၊ တဲတော်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်၊ သခင်ဘုရားနေ့ နံနက်ပိုင်းဝတ်ပြုအစည်းအဝေး၌ ဟောကြားသောဒေသနာတော်။
"အတူဒုက္ခခံလျှင်၊ ထိုသခင်နှင့်အတူစိုးစံလိမ့်မည်။ ထိုသခင်ကို ငါတို့သည် ငြင်းပယ်လျှင်၊ ငါ တို့ကို ငြင်းပယ်တောမူလိမ့်မည်။" (၂တိ ၂း၁၂)။
ဤကျမ်းပိုဒ်နှင့်ပါတ်သတ်၍ တဖန်လေ့လာကြပါစို့! ဤဒေသနာတော်ကို ပြုစုဖို့ နုတ်ကပတ်တော် အလီလီဖတ်ရှုသောအခါ၊ ယနေ့ခေတ်သစ် ဘာသာပြန်သူတို့က "နာကျင်မှုဝေဒနာ"ကို "သည်းခံစိတ်ရှည်၍ ခံစားသည်" ဟုပြန်ဆိုခဲ့ကြသည်ကို တွေ့ရသည်။ ၎င်းကျမ်းပိုဒ်ကို ဂရိဘာသာ မူရင်း၌ ဖော်ပြထားသော နှင့် တို့အနက်မှ တစ်ခုခုကို မိမိအနက်အဓိပ္ပာယ် အတိုင်း သာ သုံးထားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
၎င်းကျမ်းပိုဒ်၏ ဆိုလိုရင်းဆက်စပ်မှုကို အလေးနက်စဉ်းစားရပါမည်။ အပိုဒ်ငယ် ၁၁နှင့် ၁၂သည် ခရစ်ယာန်တို့နှင့် ခရစ်တော်ကြား ကျွမ်းဝင်ခြင်းကို တမန်တော်က ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ အပိုဒ်ငယ် ၁၁ တွင်၊ ထိုသခင်နှင့်အတူသေလျှင် အတူရှင်လိမ့်မည်" ဟု ဆိုသည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်က ဤလောကသည် အပြစ်၌နစ်မွန်းနေပြီး သေလုမျောပါးအခြေအနေကို ကြေညာလျှက်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် အပိုဒ်ငယ် ၁၁ သည် ခရစ်တော်နှင့်အတူနေလျှင် အသက်ရှင်ကြရမည်ကို ဖော်ပြနေခြင်းဖြစ်သည်။ (ရောမ ၆း၁-၃)။ အပိုဒ်ငယ် ၁၂သည် ခရစ်တော်၏ "ဝေဒနာ"၌ အတူခံစားခြင်းဖြင့် အတူမျှဝေခြင်းကို ဖော်ပြသည်။ ထို့ ကြောင့် ကိန်းယင်းကျမ်းစာနှင့် "ဂျီနီဗါကျမ်းက ဝေဒနာခံစားခြင်းအတွက်သာ သုံးနှုန်းထားပါ သည်။ အခြားဘာသာပြန်သူတို့လည်း ရူးသွပ်သူများတော့ မဟုတ်ကြပါ။ သူတို့သည် အင်္ဂလန်နိုင်ငံက ကျမ်းသတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများဖြစ်ကြသည်။ ကျမ်းစကားဆက်စပ်မှုအရ ဝေဒနာခံစားခြင်းကို သည်းခံ၍ ခံစားသည် ဆိုခြင်းထက် လေးနက်သည်ကို သိကြပါသည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် ခရစ် ယာန်တို့သည် စစ်သားတစ်ယောက်ပမာ ရဲရင့်စွာ စိန်ခေါ်မှုကို ဖြတ်သန်းဖို့ ဖော်ပြထားသည်။
"အတူဒုက္ခခံလျှင်၊ ထိုသခင်နှင့်အတူစိုးစံလိမ့်မည်။ ထိုသခင်ကို ငါတို့သည် ငြင်းပယ် လျှင်၊ ငါတို့ကို ငြင်းပယ်တောမူလိမ့်မည်။"(၂တိ ၂း၁၂)။
အကယ်၍ ယေရှုနှင့်အတူ အသေခံလျှင်၊ ကိုယ်တော်နှင့်အတူ အသက်ရှင်ကြလိမ့်မည်။ အကယ်၍ ယေရှုနှင့်အတူ ဝေဒနာ ခံစားလျှင် ကိုယ်တော်နှင့်အတူ စိုးစံကြရမည်! အင်မတန်ရိုးရှင်းလှပါသည်! အဘယ်ကြောင့် ခေတ်သစ်ဘာသာပြန်သူတို့က ဝေဒနာကို စိတ်ရှည်သည်းခံခြင်း ဟု ဘာသာပြန်ဆိုကြသနည်း? သင်သည် ဤကျမ်းပိုဒ်နှင့်စပ်လျှဉ်း၍ ဂရိကျမ်းသတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခွင့် မရှိတော့ ပါဘူး! ယနေ့ခေတ်အသင်းတော်များသည် "ဝေဒနာ"ကို မခံစားလိုကြ၍ ဖြစ်သည်! အကြောင်းမှာ ခေတ်သစ်ကျမ်းအနက်ပြန်သူတို့က ဧဝံဂလိကယ် ခရစ်ယာန်များအား ကျေနပ်စေဖို့ အတွက်သာ အနက် ပြန်ကြသဖြင့် ၎င်းကျမ်း၌ပင် အားနည်းလျှက်ရှိပါသည်။ ၎င်းကျမ်းပိုဒ်သည် အလွန်အင်မတန် ရိုးရှင်း သော အချက်ပင်ဖြစ်၏!
ခေတ်ဟောင်း ဘာသာပြန်ကျမ်းတတ်တို့သည်၊ ယနေ့ခေတ်ကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်များထက် သာလွန်၍ သိမြင်နိုင်ခဲ့ကြသည်။ ၎င်းတို့က ရော ၈း၁၇၏ အနက်သဘောအတိုင်း ဘာသာပြန်ဆိုကြသည်။
အတူဒုက္ခခံလျှင်၊ ထိုသခင်နှင့်အတူစိုးစံလိမ့်မည်။ ထိုသခင်ကို ငါတို့သည် ငြင်းပယ်လျှင်၊ ငါတို့ကို ငြင်းပယ်တောမူလိမ့်မည်။"(၂တိ ၂း၁၂)။ (KJV)
NIV ကျမ်း၌ ဘာသာပြန်ရာတွင်၊
အကယ်၍ ခရစ်တော်ခံရသော ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကို ခံကြလျှင်၊ ငါတို့သည် ခရစ်တော်၌ရှိသော ဘုန်းအသရေကို ခံရကြလိမ့်မည်" (NIV)
ရောမ ၈း၁၇၌ "ဝေးဒနာခံစားခြင်းဟူသည် နာကျင်ခြင်းကို "အမှန်တကယ်ခံစားတွေ့ကြုံခြင်း"ကို ဆိုလိုပါ သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ရွှေကျမ်းပိုဒ်ကို ကနဦးကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့က၊ ရောမ ၈း၁၇အရ၊ "ဝေဒနာခံစားခြင်း} ဟု ပြန်ဆိုခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့် လုသာက၊ "သမ္မာကျမ်း၏ တိကျသေချာတူညီချက်" ဟူ၍ ခေါ်ဆိုခဲ့ ကြသည်။
အမှန်စင်စစ်တော့ ခေတ်သစ်အနက်ပြန်သူတို့သည် မှားယွင်းချက်လိမ်ညာမှုဖြင့် ဘာသာပြန်ဆိုကြ သည်။ ယနေ့ခေတ်လူတို့သည် ဝေဒနာကို မခံစားလိုကြောင့်ကို သိထား၍ဖြစ်သည်! ယနေ့ခေတ် ဧဝံဂလိကယ် ခရစ်ယာန်တို့က ကျမ်းကို အားနည်းစေပြီး စာဖတ်သူတို့အကြိုက် လိုက်၍ ပြန်ဆိုကြသည် ကို တွေ့ရပါသည်! ကျွန်ုပ်မကြာခဏပြောကြားသကဲ့သို့ "ယနေ့ခေတ်သစ်ဘာသာပြန်သူတို့က၊ "ဘုရင် ဂျိမ်းရဲ့ ဘာသာပြန်အဓိပ္ပာယ်ကို ပစ်ပယ်ခဲ့ကြသည်"!
အတူဒုက္ခခံလျှင်၊ ထိုသခင်နှင့်အတူစိုးစံလိမ့်မည်။ ထိုသခင်ကို ငါတို့သည် ငြင်းပယ်လျှင်၊ ငါတို့ကို ငြင်းပယ်တော်မူလိမ့်မည်" (၂တိ ၂း၁၂)။
ရောမ ၈း၁၇ ကျမ်းပိုဒ် ရိုးရှင်းစွာ ဖော်ပြထားသည်မှာ၊ "ခရစ်တော်နှင့်အတူ ဆင်းရဲခံရလျှင်၊ ထိုသခင်နှင့် အတူ ဆက်ဆံသောအမွေခံလည်းဖြစ်ကြ၏" (ရောမ ၈း၁၇)ဟု လာပါသည်။
၁။ ပထမ၊ အတူ ဒုက္ခခံရလျှင်၊ ထိုသခင်နှင့်အတူ စိုးစံလိမ့်မည်။
ဒေါက်တာ ဂျေ၊ ဗန်နုန်က မှတ်ချက်ပေးပြောကြားသည်မှာ၊
"အတူဒုက္ခခံရလျှင်၊ ထိုသခင်နှင့်အတူ စိုးစံလိမ့်မည်" ဟုဆိုလိုသည်မှာ၊ ကိုယ်တော်နှင့်အတူ ဝေဒနာခံစားရမည့် ဟူသောကျမ်းပိုဒ်သည် အမှန်တကယ်ဝေဒနာ ခံစားနေသူတို့အဖို့ ၎င်းသည် အယူသည်းသောကျမ်း ဖြစ်မည်ဟု ကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။ ရောမ အင်ပါယာ ခေတ်တွင်လည်း ခရစ်ယာန်တို့သည် မာတုရအသေခံခဲ့ကြရသည်။ ခရစ်တော်ကို ငြင်းဆန်ဖို့ ငြင်းပယ်သူတို့ စုစု ပေါင်း ငါးသန်းခန့် သေကြေခဲ့ကြရသည်။
ထိုသခင်သည် ငါတို့သည် ငြင်းပယ်လျှင်၊ ငါတို့ သည် ငြင်းပယ်တော်မူလိမ့်မည်" ၎င်းကျမ်းပိုဒ်သည် ပြင်းထန်စွာ ဖော်ပြထားသည်။ ၎င်းကျမ်း က "အကျင့်မပါသော ယုံကြည်ခြင်းသည် အသေဖြစ်သည်" (ယာ ၂း၁၇) ဟု ဆိုလိုသည်ကို ရှင်ပေါလု သဘောပေါက်နားလည်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ရှင်ပေါလုနှင့် ရှင်ယာကုတ်တို့သည် တဦး နှင့်တစ်ဦး ဘယ်တော့မှ ဆန့်ကျင်ခြင်းမရှိသည်ကို သင်သိမြင်နိုင်ပါသည်။ ရှင်ယာကုတ်က ယုံကြည်ခြင်းနှင့် လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ချက်ကို ပြောဆိုပြီး ရှင်ပေါလုက မှန်ကန်သော ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် အသီးသီးနိုင်ကြောင်း ဖော်ပြသည်။ (J. Vernon Mc Gee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, 1983, volume V, p. 466; note on II Timothy 2:12).
"အတူဒုက္ခခံလျှင်၊ ထိုသခင်နှင့်အတူစိုးစံလိမ့်မည်။ ထိုသခင်ကို ငါတို့သည် ငြင်းပယ်လျှင်၊ ငါ တို့ကို ငြင်းပယ်တောမူလိမ့်မည်။"(၂တိ ၂း၁၂)။
ကနဦးခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူတိုင်းသည် စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကို တွေ့ကြုံခံစားခဲ့ကြရသည်။ တမန်တော် ၁၄း၂၂၌ ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြထားသည်မှာ၊ ရှင်ပေါလုနှင့် ဗါနဗတို့သည် လုတ္တမြို့၊ ဣကောနိမြို့၊ အန္တီအုတ်မြို့အသီးသီးတို့၌ လှည့်လည်ပြီး၊
"ထိုသို့ပြန်ကြစဉ်၊ တပည့်တော်များ၏ စိတ်နှလုံးများကို မြဲမြံခိုင်ခံ့စေသဖြင့်၊ ယုံကြည်ခြင်း၌ တည်ကြည်မည်အကြောင်း နှိုးဆော်ချီပင့်၍ ငါတို့သည် များပြားသောဆင်းရဲဒုက္ခကို ခံ၍ ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်သို့ ဝင်ကြရမည်ဟု ဟောပြောပြညွန်ကြ၏" (တမန် ၁၄း၂၂)။
"ငါတို့သည် များပြားသောဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံ၍ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့ ဝင်ရကြမည်ဟု ဟောပြော ပြညွန်ကြ၏" ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကို ဂရိဘာသာစကား ဓအူ့ငဈငျဓ မှ ပြန်ဆိုထားပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ "ဖိအား၊ ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ ဒုက္ခ၊ ဝေဒနာ"ဟူ၍ အဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။ (အထူးသဖြင့်) ကနဦး ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူတို့သည် "လောကီနိုင်ငံကို မှောက်လှန်သော သူများဖြစ်ကြသည်" (တမန်တော် ၁၇း၆)။ အကြောင်းမှာ ထိုသူတို့သည် မိမိကိုယ်ကို မိမိငြင်းပယ်ကြပြီး မိမိလက်ဝါးကားတိုင်ကို ထမ်းရွှက် ကြသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ "ခရစ်တော်မိန့်တော်မူသည်ကား၊"
ငါ၌ ဆည်းကပ်လိုသောသူဖြစ်လျှင်၊ ကိုယ်ကိုကို ငြင်းပယ်ရမည်၊ ကိုယ့်လက်ဝါးကားတိုင်ကို နေ့တိုင်းထမ်း၍ ငါ့နောက်သို့လိုက်ရမည်" (လုကာ ၉း၂၃)။
"ငါတို့သည် များပြားစွာသော ဆင်းရဲဒုက္ခ (ဖိအားပေးခြင်း၊ တိုက်ခိုက်ခြင်း ဒုက္ခခံရခြင်း၊ ဝေဒနာခံစား ခြင်း) ကိုခံ၍ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့ ဝင်ရကြမည်" (တမန် ၁၄း၂၂)။
အတူဒုက္ခခံလျှင်၊ ထိုသခင်နှင့်အတူ စိုးစံလိမ့်မည်။ ထိုသခင်ကို ငါတို့သည် ငြင်းပယ် လျှင်၊ ငါတို့ကို ငြင်းပယ်တော်မူလိမ့်မည်။"(၂တိ ၂း၁၂)။
တရားဟောမင်းသားကြီး စပါဂျန်က "ဝေဒနာတော်နှင့် ယေရှုနှင့်အတူစိုးစံခြင်း"ဟူသော သူ၏ဝေဒနာ တော်၌ ဟောကြားခဲ့သည်မှာ၊
ဗီ ၃၆၂ ခုနှစ်၊ မာကပ်စ်အာရေတာ ဇာတ်သည်၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာတရားဘက်သို့ ပြောင်းလဲ ကုန်သဖြင့်၊ ပြိုပျက်နေသော နတ်ဘုရား ဗိမာန်တော်ကို ပြုပြင်ဖို့ ဂျူလီယန်က အမိန့်ပေးခြင်း ကို ခံရ၏။ ထိုသူသည် ထိုအမိန့်ကို နာမခံခဲ့ပါ။ ထိုသူအား အာရုဏ်ရအောင် အဝတ်အစား များချွတ်၍၊ ဓါးချွန်ဖြင့် အကြိမ်ကြိမ်ထိုးဖောက်ခဲ့ကြသည်။ ထိုသူသည် မျက်နှာမပျက် တင်းခံလျှက်နေ၏။ အကယ်၍ ထိုနတ်ဘုရားဗိမာန်တော် တည်ဆောက်ဖို့ အကူအညီပေးခဲ့မယ် ဆိုလျှင်၊ သူ့အား ထိုညှင်းဆဲခြင်းမှ လွတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် သူသည်လက်မခံခဲ့ပါ။ ထိုသူအပေါ်သို့ ပျားရည်ကို သွန်းလောင်းကြပြီး ပျားကောင်တို့ကို တုတ်စေခဲ့ကြသည်။ အနာ မှ သွေးတလူးလူး စီးဆင်းနေပါသည်။ ထိုသူသည် သေလုဆဲဖြစ်သော်လည်း ကိုယ်တော်အား မငြင်းပယ်နိုင်ခဲ့ပါ။ ငြင်းထန်သော ဝေဒနာကို ခရစ်တော်နှင့်အတူ ခံစားနေရသဖြင့် ဝမ်း မြောက်လျှက်ရှိသည်။ (C. H. Spurgeon, “Suffering and Reigning with Jesus,” The Metropolitan Tabernacle Pulpit, 1991 reprint, volume X, p. 11).
၁၉၀၉ခုနှစ်အထိ၊ ရိုမေးနီးယား ကွန်မြူနစ် အကျဉ်းထောင်ထဲ အနှစ်၁၄နှစ်တိတိ ညှင်းဆဲခြင်းခံခဲ့ သော ရက်ချစ် ဝုမ်ဘရန်းလို ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တို့ကို လေးစားဂုဏ်ပြုပါတယ်။ ၁၉၂၄-၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ကွန်မြူနစ် ချွေးထွက်စခန်း၌ အလုပ်ကြမ်း ထောင်ဒဏ် ၂၀တိတိ ညှင်းဆဲခံခဲ့သော ရှမွေလလမ်းလို ပုဂ္ဂိုလ်ထူးတို့ကို ရိုသေလေးစား ဂုဏ်ပြုပါတယ်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပွဲကာလ၊ ဟစ်တလာအားဖြင့် ဧဝံဂေလိတရားဟောကြား ၍ ကြိုးမိန့်ပေးခဲ့သော ဆရာကြီး ဒက်ထရစ်ဘိုဟိုဗါလို ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကို ဂုဏ်ပြုပါတယ်။ ဒီကနေ့ ရာနှင့်ချီ သော မွတ်ဆလင်နိုင်ငံများ၌ ခရစ်တော်အဖို့ဝေဒနာခံခဲ့သော ယုံကြည်သူတို့အား ဂုဏ်ယူလေးစားပါတယ်၊ သင်ကောဘယ်လိုလဲ?
အပတ်စဉ်ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲ တိုက်ဖို့အတွက်နှင့် ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းဟောဖို့ မိမိကိုယ်ကို အပူဇော်ခံမှလား¿ ၁၉၅၆ခုနှစ်၊ တောင်ဘက်ခြမ်းနှစ်ခြင်းအသင်းတော် ထုတ်ဝေခဲ့သော နှစ်ခြင်းဓမ္မသီချင်း မိတ္တူကို ကျွန်ုပ်လေ့လာဖတ်ရှုခဲ့သည်။ နောက်ကြောင်း ကောက်လေ့လာသောအခါ၊ ရှေ့ယုံကြည်သူတို့သည် ညှင်း ဆဲခြင်းဒုက္ခဝေဒနာကြောင့် နိုးထမှုရှိခဲ့သည်။ ၁၇၈၃-၁၈၂၆ခုနှစ် ရစ်ကိနလ် ဟက်ဘာသီကုံးသော "ဘုရားသားတော် စစ်ပွဲသို့ချီ" ဟူသော ဓမ္မသီချင်းကို လေ့လာသောအခါ ကျွန်ုပ်နှလုံးတုန်လှုပ်ခဲ့၏။ တောင်ဘက်ခြမ်း နစ်ခြင်းအသင်းတော်တို့၏ ဓမ္မသီချင်းက ကျွန်ုပ်အား စိတ်လှုပ်ရှားစေခဲ့သည်။ အောက် ပါဓမ္မသီချင်းတပိုဒ် ဖယ်ထုတ်ခဲ့ကြပြီးဖြစ်သည်။
မဟာဝိညာဉ်ဆုကျေးဇူး ဇူးရ၊ တကျိတ်နှစ်ပါးတို့လည်း
သေဘေးမကြောက်မျော်လင့်နေကြ အဆုံးတိုင်တည်ကြည်၊ ခြသေ့Fမက မိုးထားသောဓါးမကြောက်အောင် လျှိူးခဲ့သည် သန့်ရှင်းသူ အပေါင်း
(၁၇၈၃-၁၈၂၆ ခုနှစ် ရင်ကီနယ်လ်ဟာဘာ သီကုံးသော "ဘုရားသားတော်စစ်ချီတော်မူခြင်း")။
၎င်းဓမ္မသီချင်းစာသားများက သင့်အားဆွဲခေါ်နေပေမည်! ၎င်းသီချင်းက လူငယ်တို့အား ဆွဲဆောင်နေ ပြီး ခရစ်တော်အဖို့ မိမိကိုယ်ကို ယဇ်အပူဇော်ခံလျှက်၊ လှုံ့ဆော်နေပေသည်! ၁၉၅၆ခုနှစ်တွင် ဘာကြောင့် ၎င်းသီချင်းအပိုဒ်ကို ဖယ်ရှားခဲ့သနည်း¿ အဘယ်ကြောင့်ဆုငိသော် ကျွန်ုပ်ရှင်းပြပါမည်! အသက်ကြီးရင့် သောအမျိုးသမီးတို့ကို ၎င်းသီချင်းက ကတိကအောက်ဖြစ်စေ၍၊ ဖြစ်သည်! "လက်ဝါးကားတိုင်နှင့်မီးအိုင်" ကို မစဉ်းစားလို၍ဖြစ်သည်။ သူတို့သည် "သူရဲတို့၏ ဓါးလက်နတ်များ"ကို ကြောက်ရွှံ့၍ဖြစ်သည်။ "ဟိန်းတောက်သော ခြင်္သေ့မင်း"ကို လန့်ဖြန့်၍ ဖြစ်သည်။ သို့တည်းမဟုတ် "မာတုရများလို သတ်ဖြတ်ခံ ရမည်"ကို ကြောက်ရွှံ့၍ ဖြစ်သည်။ သူရဲဘောနည်း၍ ရှက်ကြောက်၍ ဖြစ်သည်! မာတုရတို့၏ ယုံကြည် ခြင်းကို တောင်ဘက်တေးဂီတဌာနက သက်သေမထူလို၍ ၎င်းစာသားကို ဖယ်ရှားလိုက်ခြင်းဖြစ်၏! ဘယ် တော့မှ မရှက်မကြောက် ၎င်းသီချင်းကို ဆိုကြပါစို။ ကျွန်ုပ်တို့တတ်နိုင်သမျှ ၎င်းသီချင်းကို သီဆိုကြပါစို့! သီချင်းစာအုပ်၏နောက်ဆုံးသီချင်းဖြစ်သော ၎င်းသီချင်းကို သီဆိုကြပါစို့!
တိုင်အောင် တည်ကြည်၊ ခြင်္သေ့မက၊ မိုးထားသောဓါးမကြောက်အောင် လျှိူးခံသည် သန့်ရှင်း
အလံတော်သည် အဝေးထင်ရှား အဘယ်သူလိုက်သနည်း၊
သခင်ဘုရားခံဒုက္ခပင် ဆက်ဆံ၍ အောင်မြင်သည်၊
(၁၇၈၃-၁၈၂၆၊ ရီနီနယ်လ်ဟာဘာ သီကုံးသော "ဘုရားသခင်၏သားတော် စစ်ချီခြင်း ကျူး")။
"သခင်ဘုရားခံ ဒုက္ခပင် ဆက်ဆံ၍ အောင်မြင်သည်" ဟုတ်ပါပေတယ်၊၊ ၎င်းသီချင်းစာသားကဲ့သို့ တမန်တော်များ တွေ့ကြုံခဲ့ရကြသည်။
၂။ ဒုတိယ၊ ထိုသခင်ကို ငြင်းပယ်လျှင်၊ ငါတို့ကို ငြင်းပယ်လိမ့်မည်။
ယေရှုသည် တိတ်တဆိတ်၊ ထိုသို့သတိပေးခဲ့ပါသည်။
"အကြင်သူသည် လူတို့ရှေ့မှာ ငါ့ကိုငြင်းပယ်အံ့။ ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိသော ငါ့ခမည်းတော်ရှေ့ မှာ ထိုသူကို ငါငြင်းပယ်လိမ့်မည်"
ရှင်ပေါလုက၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ရွှေးချယ်ထားသော ကျမ်းပိုဒ်၌၊ "ထိုသခင်ကို ငါတို့သည် ငြင်းပယ်လျှင်၊ ငါတို့ကို ငြင်းပယ်တော်မူလိမ့်မည်"ဟု မိန့်ကြားခဲ့သည်။ စစ်မှန်သော တပည့်တော်ဖြစ်ဖို့ရန် ခရစ်တော်၏ ဆင်းရဲခြင်းကို ထိတွေ့ခံစားဖို့ ငြင်းပယ်သောသူတို့ မှားယွင်းသောခရစ်ယာန်များသာ ဖြစ်သည်။ မျိုးစေ့ ကြဲခြင်းပုံဥပမာ၌ ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ "ကျောက်ပေါသောမြေ၌" ကျသော မျိုးစေံကဲ့သို့ ဖြစ်နေမည်။
"ကျောက်ပေါ်၌ကျသော မျိုးစေ့ကား၊ တရားစကားကို ကြား၍ဆမ်းခြောက်သောစိတ်နှင့် ခံယူ သော်လည်း စိတ်နှလုံး၌အမြစ်မစွဲ၊ ခဏတာယုံကြည်သဖြင့် စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကို ခံရသော အခါ၊ ဖေါက်ပြန်သောသူတို့ကို ဆိုလိုသတည်း" (လုကာ ၈း၁၃)။
ဒေါက်တာ ရီနိုန်ကာ ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊ "ကျရောက်သဖြင့်" ခန့်ခြောက်သွားခြင်း ဟု ဆို လိုရင်းသည် ထွက်သွားခြင်း ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ (Fritz Rienecker, Ph.D., A Linguistic Key to the Greek New Testament, Zondervan, 1980, p. 161; note on Luke 8:13).
စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းရောက်လာသောအခါ၊ မိမိတို့ဒေသန္တရအသင်းတော်မှ အဝေးသို့ထွက်ပြေးခဲ့ကြ သည်။ "ထိုသူတို့၌ အခြေအမြစ်မရှိ၍ဖြစ်သည်။" စစ်မှန်သော အသက်တာ၌ မပြောင်းလဲ၍ဖြစ်သည်။ မာကု ၄း၁၇တွင် "စုံစမ်းခြင်း ကျရောက်လာချိန်"ကို ပုံဥပမာအားဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။
”အမှုအခင်းနှင့် ညှင်းဆဲခြင်းကို ခံရသောအခါ၊ ချက်ချင်းဖေါက်ပြန်တတ်သည်ဟု ဆိုလိုသ တည်း” ဟလဲကျခြင်း NASV].
ထိုသို့သောသူတို့ကို တရားဆုံးဖြတ်သောနေ့တွင် ယေရှုကငြင်းပယ်လိမ့်မည်။ ထိုအခါ ကိုယ်တော်က" သင်တို့ကို ငါအလျှင်းမသိ။ အဓမ္မမှုကို ပြုသောသူတို့ ငါထံမှဖယ်ကြဟု ထိုသူတို့အား အတည့်အလင်းငါ ပြောမည်" (မဿဲ ရး၂၃)။
အချို့သော အသင်းတော်တို့သည် ခရစ်တော်ကို ငြင်းပယ်ထားသောသူတို့ကိုပင် အသင်းတော်၌ ပါ ဝင်စေသည်။ ထိုသူတို့က မိမိတို့သည် ဥု ဟုထင်ကြသည်။ သို့သော် အပြစ်ပြုမြဲပြုခြင်းဖြင့် ခရစ်တော် ကို ငြင်းပယ်ကြသည်။ ထိုသို့သော သူတို့သည် တရားတော်ကို ငြင်းပယ်သော သူတို့ဖြစ်ကြသည်။ ထိုသို့ သောသူတို့ကို “အီတလီနိုင်ငံ၌ တရားကို ငြင်းပယ်သောသူ” ဟူ၍ (အင်တာနက်တွင်လည်း ဝင်ဖတ်နိုင်ပါ သည်! ) တိတု ၁း၁၆ တွင် ရှင်ပေါလုက ဖော်ပြသည်မှာ၊
"ဘုရားသခင်ကို သိယောင်ဆောင်သော်လည်း၊ အကျင့်အားဖြင့် ဘုရားသခင်ကို ငြင်းပယ်ကြ၏ စက်ဆုပ်ရွှံ့ရှာဖွယ်သောသူ၊ နားမထောင်သောသူ၊ ကောင်းသောအမှုတစ်ခုကိုမျှ မပြုတတ်သော ညဏ်မရှိသောသသူ ဖြစ်ကြ၏" (တိ ၁း၁၆)။
တရားကို ငြင်းပယ်သောသူတို့ပင်လျှင်၊ ယုံကြည်ခြင်းခံယူချက်ကို လေ့လာကောင်းလေ့လာကြပါမည်။ သို့ သော် မိမိတို့အသက်ရှင်ခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင်ကို ငြင်းပယ်ကြသည်။ The Reformation Study Bible ၌ ပြောကြားသည်မှာ၊ "ဓမ္မသစ်ကျမ်း၌ အသက်တာအသစ်၌ မှန်ကန်စွာပြောင်းလဲဖို့ ခရစ်တော်၌ ယုံကြည် ခြင်းရှိရမည်။ ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူတို့သည် မှန်ကန်သော ယုံကြည်ချက်ဖြင့် အသက်တာပြောင်းလဲဖို့ လိုပါသည်။" (ညသအန သည Tငအကျ ၁ါ်၁၇) "အကျင့်အားဖြင့် ဘုရားသခင်ကို ငြင်းပယ်ကြ၏"။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေသနာတော်ဖြစ်သော "အီတလီနိုင်ငံ၌ တရားတော်ကို ငြင်းပယ်သောသူ"ကို ဖတ်ဖြစ် သော လာအိုနိုင်ငံရှိ ဘာသာပြန်တစ်ဦးက ကျွန်ုပ်ထံစာတစ်စောင်ကို ရေးသားခဲ့သည်။
လူအများတို့သည် အမှန်တကယ်ကယ်တင်ခြင်းရရှိပြီဟု ပြောကြသည်။ သို့သော် သူတို့၏အ သက်တာသည် ပြောင်းလဲခြင်းမရှိကြပေ။ ကျွန်ုပ်တို့ လာအိုနိုင်ငံနှင့်ထိုင်းနိုင်ငံတွင် လူအများ တို့က မိမိတို့သည် ခရစ်ယာန်ဖြစ်ကြသည်ဟုဆိုကာ ယေရှု၏နာမတော်ကို ရှုတ်ချကြသည်။ ထို သူတို့သည် သောက်ကြူးလျှက်၊ ကလျှက်၊ ခိုးလျှက်၊ ဆိုးယုတ်သောသက်သေကိုသာ တပါးသူတို့ရှေ့၌ ထင်ရှားခဲ့ကြသည်ဟု ရေးသားခဲ့သည်။
လာအိုနိုင်ငံတွင် ခရစ်ယာန်လုံးလုံးလျှားလျှား မဖြစ်လိုကြပါ ပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။ "အဆိုးဆုံးကတော့ အချို့လူတို့သည် ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူတို့နှင့်ပင် မိတ်ဆွေမဖြစ်လိုကြ" ဟု ပြောကြားခြင်းဖြစ်သည်။
အီတလီနိုင်ငံ၊ လာအိုနိုင်ငံနှင့် "ထိုင်းနိုင်ငံ"၌ရှိ လူတို့သည် တရားတော်ကို အံ့မခန့်ငြင်းပယ်ခဲ့ကြ သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ အမေရိကနိုင်ငံတွင်လည်း မှားယွင်းသော ခံယူချက်များကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ အရှက်ခွဲ၊ ခေါင်းငုံ့ကြရပေတော့မည်။ မှားယွင်းသော ခံယူချက်များ ယနေ့နောက်ဆုံးသောကာလ၌ ကမ္ဘာတစ်ခွင် ပြည့်နှက်လျှက်နေပါသည်။ ယေရှုက အောက်ပါအတိုင်း ကြိုတင်ဟောကြားခဲ့ပါသည်။
"မတရားသောအမှုတို့သည် များပြားသဖြင့် အများသောသူတို့၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် ခေါင်းပါး လိမ့်မည်" (မဿဲ ၂၄း၁၂)။
၎င်းသည် ခရစ်တော် ဒုတိအကြိမ်ကြွလာတော့မည့် နမိတ်လက္ခဏာပင်ဖြစ်သည်µ ခရစ်ယာန် ယုံကြည်သူတို့ပင်လျှင် ဆုတ်ယုတ်ကြလိမ့်မည်။ မေတ္တာရွှေ့လျှော့ကြလိမ့်မည်။ အကြောင်းမှာ နောက်ဆုံး သောကာလ၌ "တရားတော်ကို ငြင်းပယ်သောသူတို့ ပေါ်လာမည်ဖြစ်သည်µ အထင်မမှားစေလိုပါ၊ တရား တော်ကို ငြင်းပယ်သောသူဟူသည်၊ အပြစ်ပြုလျှက် "ကိုယ်တော်အား ငြင်းပယ်သောသူ" (တိတု ၁း၁၆) ကို ဆိုလိုပါသည်။
စစ်မှန်သောခရစ်ယာန်ဟူသည် ခရစ်တော်ကို ဘယ်တော့မငြင်းပယ်နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် ယေရှုက မဿဲ ၂၄၊ အငယ် ၁၃တွင် မိန့်တော်မူသည်ကား၊
"အကြင်သူသည် အဆုံးတိုင်အောင် တည်ကြည်၏။ ထိုသူသည် ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်လိမ့် မည်" (မဿဲ ၂၄း၁၃)။
မုန်းတီးခြင်း၊ မှားယွင်းစေသော ပရောဖက်ပြုချက်များ၊ အပြစ်အားနည်းချက်များတို့သည် "တရားမဲ့" နေထိုင်ခြင်းဖြစ်၍ တရားကိုမုန်းတီးသောသူ ခရစ်ယာန်ဖြစ်ယောင်ဆောင်၍ မုန်းတီးသောသူတို့ကို ခေါ် သည်။ စစ်မှန်သောသူတို့သည် "အဆုံးတိုင်အောင် တည်ကြည်သောသူ" (မဿဲ ၂၄း၉-၁၃) များဖြစ် သည်။ ဓမ္မသီချင်းဟောင်းတို့၌ ဖော်ပြထားသည်မှာ၊
(၁၈၇၁-၁၉၃၇၊ မာဘယ်လွန်စတန်ကတ် သီကုံးသော "ကိုယ်တော် တဖန်ပြန်လာမည်")။
ခရစ်တော်သည် သင်တို့၏အပြစ်ကိုဖြေလွတ်ပြီး ကယ်တင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ သင်တို့၏အပြစ်အဖိုးအခ များအတွက် လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ် အသေခံပေးဆပ်ပြီးဖြစ်သည်။ သွန်းလောင်းတော်မူသော အသွေး တော်အားဖြင့် ဆေးကြောပြီးဖြစ်သည်။ သင့်အား ထာ၀ရအသက်ကို ပေးဖို့ရန်၊ ကိုယ်တော်သည် သေခြင်း မှ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပါသည်။ မိတ်ဆွေ သင့်အပြစ်ငရဲမှ အသက်ရှင်ခြင်းသို့ လှမ်းလာခဲ့ပါ! နောင်တရ လျှက် ယေရှုထံယုံကြည်ကိုးစားပါ၊ ကိုယ်တော်သည် သင့်အားကယ်တင်ပါလိမ့်မည်။ အခုပင်လျှင် သင့် အားကယ်တင်ပါလိမ့်fမည်!
အသက်ရှင်ခြင်းနှင့်ပါတ်သတ်၍ မေးမြန်းဆွေးနွေးလိုပါက၊ မိမိနေရာမှ အနောက်ဘက်ဆွေးနွေးခန်း ထဲသို့ လှမ်းလာခဲ့ကြပါ။ ဒေါက်တာ ကေကန်က ဦးဆောင်ပြီး ဆွေးနွေးပေးပါလိမ့်မည်။ ယခုပင်လျှင် အနောက်ဘက် ဆွေးနွေးခန်းဆီသို့ လှမ်းလာခဲ့ပါ။ ဒီနေ့နံနက် ယေရှုသခင်အား ယုံကြည်ကိုးစားကြမည့် သူတို့အဖို့ ကျေးဇူးပြု၍ ဒေါက်တာ တာချန်မှ ဆုတောင်းကူညီပေးပါ။ အာမင်!
စာရေးသားလျှင် မည်သည့် တိုင်းပြည်က စာရေးသားသည်ကို ပြောပြရမည်၊ သို့မဟုတ်လျှင် ပြန်လည်ဖြေကြား နိူင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဤတ ရားဒေသနာ အားဖြင့်ခွန်အားရလျှင် စာရေးသားပြီးပြောပြပါ။ သို့သော် မည်သည့်တိုင်းပြည်က ရေးသားသည်ကို အမြဲတမ်း ထည့်သွင်းရေးသားပေးပါ။ ဒေါက်တာ Hymer၏ အီးလ်မေး လိပ်စာမှာ rlhymersjr@sbcglobal.net (နှိပ်ပါ)၊ ဒေါက်တာ Jymers ကို မည်သည့်ဘာသာ စကားနှင့်မဆို စာရေးသားနိူင်သည်၊ သို့သော် ဖြစ်နိူင်လျှင် အင်္ဂလိပ်လိုရေးသားပါ။ စာတိုက်ဖြင့် ရေးသားပေးပို့လိုလျှင် စာတိုက်သေတ္တာ အမှတ် ၁၅၃၀၈၊ လော့အိန်ဂျယ်၊ စီအေ ၉၀၀၁၅၊ ဖုန်း ဆက်လိုသောအခါ ( ၈၁၈)၃၅၂-၀၄၅၂။ တရားဒေသနာနိဂုံး သင်သည် ဒေါက်တာ Hymer ၏တရားဒေသနာကို အင်တာနက်ပေါ်တွင် www.sermonsfortheworld.com ဖြင့် အပတ်တိုင်းကြည့်ရှုနိူင်သည်။ "တရားဒေသနာစာမူ"ကိုနှိပ်ပါ။ ဤတရားဒေသနာစာမူများသည် မူပိုင်မဟုတ်ပါ။ ဒေါက်တာ Hymer ၏ခွင့်ပြုချက်မလိုဘဲ အသုံးပြုနိူင်ပါသည်။ သို့ရာတွင် ဒေါက်တာ Hymer ၏ ဗွီဒီယိုတရားဟောချက် များကိုမူ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်သာ အသုံးပြုနိူင်သည်။
-ဒေသနာတော်မတိုင်ခင် မစ္စတာ အေဘယ်လ် ပရုန်းဟုန်းမှ ၂တိ ၂း၃-၁၂ကို ဖတ်ကြားပေးပါ သည်။
-ဒေသနာတော် မတိုင်ခင် မစ္စတာဘင်ဂျင်မင် ခင်ကိတ်ဂရိဖက်စ်မှ
(၁၇၈၃-၁၈၂၆ ခုနှစ် ရယ်ဂီလ်နာ ဟတ်ပါ၊ သီကုံးသော " သားတော်ဘုရား စစ်ချီသွား")။
(၂တိ ၂း၁၁၊ ရောမ ၈း၁၇)။
၁။ ပထမ၊ အတူဒုက္ခခံရလျှင်၊ ထိုသခင်နှင့်အတူ စိုးစံလိမ့်မည်။ (ယာကုတ် ၂း၁၇)၊ (တမန်တော် ၁၄း၂၂၊ ၁၇း၆)၊ (လုကာ ၉း၂၃)။
၂။ ဒုတိယ ၊ ထိုသခင်ကို ငြင်းပယ်လျှင်၊ ငါတို့ကို ငြင်းပယ်လိမ့်မည်။ (မဿဲ ၁ဝး၃၃)၊ (လု ၈း၁၃)၊ (မာကု ၄း၁၇)၊ (မာဿဲ ၇း၂၃)၊ (တိတု ၁း၁၆)၊ (မဿဲ ၂၄း၁၂၊ ၁၃)။